अब यसरी सजाउनुहोस् घर (कोमल मैनालीसँगको कुराकानी) - Postmandu
अब यसरी सजाउनुहोस् घर (कोमल मैनालीसँगको कुराकानी)
2021-04-16 2021-05-14 PostmanduLeaveaComment on अब यसरी सजाउनुहोस् घर (कोमल मैनालीसँगको कुराकानी)
हिजोआज मानिसहरू आफ्नो घरलाई नयाँ सोच र प्रविधिअनुरूप सजाउन चाहन्छन् । घरको सुन्दरतासँगै व्यक्तिगत पहिचानलाई जोड्दै घरको बाहिरी तथा आन्तरिक सजावटमा नयाँपन दिइरहेको देख्न सकिन्छ । यसका लागि बजारमा विभिन्न किसमका आधुनिक सामाग्री भित्रिरहेका छन् ।
यसैक्रममा घरभित्रको किचेन थप आकर्षक बनाउन विभिन्न आकर्षक डिजाइनहरुमा एमबिसी (MBC) ट्रेडमार्कको किचेन सिङ्गहरु, धारा, सावर, बाथरुम क्याबिनेट (फर्निचर) लगायत applo brand का स्टिम ज्याकुजीहरु बजारमा आकर्षक तथा लोकप्रिय बस्तुमा पर्छन् । खासगरी घरको भित्री भागमा वाल सिलिङ्ग तथा घरका कोठालाई आकर्षक बनाउन अब तपाइँले सिल्क प्लास्टर (SILK PLASTER) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सिल्क प्लास्टर प्रयोग गरेर तपाइँ आफ्नो घर, कोठा तथा अफिसलाई झनै सुन्दर र आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौंको पानीपोखरी-३ मा रहेको मैनाली विजनेस कन्सर्न (एमबिसी) प्रालिले विगत ९ वर्षदेखि एमबिसी ब्रान्डका किचेन सिङ्ग, धाराहरु, बाथरुम फर्निचर, स्टिम ज्याकुजी, कमेड, टायल, Import गर्दै आएको छ । त्यस्तै विगत तीन वर्षदेखि सिल्क प्लास्टर युरोपबाट Import गरी नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ ।
सर्लाही जिल्ला रञ्जितपुरमा जन्मिएका कोमल प्रसाद मैनाली पिपल्स क्याम्पसबाट बिकम उत्तीर्ण गरी सरस्वती क्याम्पसमा एमकम पढ्दापढ्दै २०४५ सालदेखि काठ व्यवसायमा ‘मैनाली स-मिल तथा फर्निचर उद्योग’को रुपमा व्यवसायमा प्रवेश गरेका हुन् । फर्निचर व्यवसायको लामो अनुभव लिदालिदै विगत ९ वर्षदेखि ‘मैनाली विजनेश कन्सर्न प्रालि’ कम्पनीमार्फत आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड एमबिसी मार्फत स्यानेटरी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । मैनालीले आफ्नो ट्रेडमार्कमार्फत स्यानेटरी सामाग्रीहरु भारत, चीन, दुबई तथा युरोपबाट आयात गरी नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
कोमल प्रसाद मैनाली
एमबिसीका प्रवन्ध निर्देशक कोमल मैनालीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाइँ काठ व्यवसायमा पनि सफल हुनुहुन्छ, पछिल्लो सयम एमबिसी ब्रान्डमार्फत स्यानेटरी सामानको व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ, तपाइँको ब्रान्डका विशेषता के छन् ?
एमबिसी नामको ब्रान्ड राखेर यो व्यवसाय काम सुरु गर्यौं । सेनेटरी आइटममा एमबिसी ब्रान्ड राख्यौं । किचेन सिङ्गमा हामी काठमाडौं र नेपालमै नम्बर वान छौं । नेपालभरी हाम्रो ब्रान्ड खपत हुँदै आएको छ । तीन् वर्षअघि सिल्क प्लास्टर पनि युरोबाट नेपाल भित्र्यायौं । सिल्क प्लास्टर रंग चाहीँ रंग नै हो, तर भिन्नै टेक्चर, नेचुरल, ग्रीन प्रोडक्ट हो । यही प्रोडक्टहरु बजारमा बेचिरहेका छौं । सामान्य पसलभन्दा केही फरक तरिकाले आफ्नो छुट्टै ब्रान्ड मार्फत फ्याक्ट्रीमै गएर सामान आयात गरी नेपाली बजारमा सुलभ मूल्यमा क्वालिटीयुक्त तथा राम्रा सामान दिन सकिन्छ भनेर मैनाली विजनेस कन्सर्न प्रालि सञ्चालन गरेका हौं ।
२०४५ सालदेखि २६ वर्ष फर्निचर व्यवसाय गरेँ । मैनाली स-मिल तथा फर्निचर उद्योगले बजारमा राम्रो पहिचान बनायो । त्यसपछि मोटरसाइकल इम्पोर्टको काम गरेँ । चाइनाबाट झोंगु बाइक आयात गरी विक्रि गर्यौं । हामीले २०० भन्दा बढी बाइक बेच्यौं । विगत ९ वर्षदेखि स्यानेटरी व्यवसाय सुरु गरेको छु । सुरुदेखि कन्सट्रक्सन लाइनतिर रुचि थियो र काम पनि गर्दै आएको थिएँ । फर्निचरबाट बजारमा सहज चिनजान पनि थियो । त्यसपछि फरक तरिकाले आफ्नो छुट्टै ब्रान्ट मेन्टेन गरेर सुलभ मूल्यमा क्वालिटी सामान दिने सोचेर यो व्यवसायमा हात हालेको हुँ ।
स्यानेटरी सामानको बजार कस्तो छ नेपालमा ?
पहिले बजारमा कस्तो समस्या देखियो भने, चाइनाबाट आएको सामान ग्राहकलाई यो त युरोप, सिंगापुर, मलेशियाबाट आएको हो भनेर भन्दिने चलन पनि रहेछ । बजार बुझदा हामीले यी कुराहरु थाहा पायौं । होइन जे जेनुइन हो, जहाँ जुन कम्पनीबाट आएको हो त्यही शेयरिङ गर्नुपर्छ भनेर त्यही मोडलमा हामीले छुट्टै ब्रान्डिङ गरेका हौं ।
ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै हामीमा ब्रान्डप्रतिको दायित्व हुन्छ । त्योसँग हाम्रो इमेज जोडिन्छ । क्वालिटीमा सम्झौता गर्ने कुरा भएन । मूल्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा स्थापित हुन्छु, आफ्नो ट्डमार्कबाट अघि बढ्छु भनेपछि हामी फ्याक्ट्रीसँग एटेजमेन्ट भएर प्रोडक्सनदेखि लिएर क्वालिटी, प्राइससम्म आएर बजारमा हाम्रो प्रोडक्ट पुग्छ । जसले गर्दा बजारमा अरु प्रोडक्टभन्दा अलि फरक, सस्तो प्राइस र क्वालिटीयुक्त सामान ग्राहकसम्म पुर्याउने गर्छौं । हामी यसकारण बजारमा फरक छौं ।
यो सामान राम्रो हो भनेर ग्राहकले कसरी चिन्ने ?
घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, पहिले अलिकती समय छुट्याएर हामीहरुजस्ता ५-७ जनाको कुरा सुनिदिनुहोस् । प्रोडक्ट हेर्नुहोस् । सबै जानकारी लिनुहोस् । कुनै पनि प्रोफेसनल मान्छे बजारमा लामो समयदेखि बसेको छ भने, उसले कहिले पनि नेगेटिभ कुराहरु गर्दैन । किनकी उ प्रोफेसनल रुपमा नै बजारमा उभिन चाहन्छ । र उसले वास्तविक (सही) कुरा गर्छ । ती कुराहरु तपाइँहरुले सुन्नुहोस् । सेनिटरी फिल्डको मान्छे सँग भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, सबै सामानको क्वालिटी हेर्नुहोस्, रेटहरु लिनुहोस्, स्टिमेट गर्नुहोस्, अनि मात्र डिसिजन गर्नुस् । अनि मात्र फिल हुन्छ फलानोकोमा कुन प्राइसमा कस्तो प्रोडक्ट पाउनुभयो, अर्कोमा कस्तो पाउनुभयो भनेर ।
आजको दिनमा पुरानो, प्रतिष्ठित तथा ब्रान्डेड कम्पनीहरु र हाम्रो प्रोडक्टको रिफ्रेन्स करिब करिब ३५-४० प्रतिशतको फरकमा हामी कम छौं । हामीले प्रोडक्ट दिने त्यही हो (सेम नै हो) । हामीले जहाँबाट म्यानुफ्याक्चर गरेर ल्याएका हुन्छौं उनीहरुले पनि त्यहीँबाट ल्याउने हो । तर उनीहरुले भन्दा हामीले करिब ३० ४० प्रतिशत कममा बजारमा सेम उही प्रोडक्ट दिन सक्छौं, दिइरहेका छौं । यो कुरा चाहीँ ग्राहकहरुले बुझ्न एकदमै जरुरी छ । प्रतिष्ठित कम्पनीहरुको प्रोडक्ट हामी त्यही क्वालिटी, सस्तो र सेम वारेन्टीमा दिइरहेका छौं । जसका कारण हाम्रो प्रोडक्टर बजारमा राम्रो र सस्तोमा पर्छ ।
मानौं, बजारमा कसैले कुनै चाइनिज नाम जिंफु भनेर प्रोडक्ट ल्याउला अर्को फुज्यान भन्ने ल्याउला उनीहरुमा स्टाबलिटी भएन, उनीहरुले जे पनि ल्याएर बजारमा दिने भए । कारण के छ भने, एउटै ब्रान्ड कन्टिन्युटी बस्ने हो भने क्वालिटीको जिम्मा हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्छ । मैले मेरो प्रोडक्ट त बजारमा ग्राहकले गाली गर्ने गरी त ल्याउँदिन नि ।
अर्को कुरा फ्याक्ट्रीबाट प्रोडक्सन निस्कँदा एउटै ग्रेडका प्रोडक्टहरु आउँदैनन् । तर म्यानुफिक्चरले जुन प्रोडक्ट बजारमा ल्याउँछ उसले म्यानुफिक्चर गरेको सबै प्रोडक्ट बजारमा बेच्छ, उसले राम्रै भनेर बेच्छ । तर त्यसमा ग्रेडिङ्ग सिस्टम भएको हुनाले जसले ब्रान्डिङ्ग सिस्टमबाट काम गरेको हुन्छ, उसले क्वालिटी बेसमा काम गर्छ । विभिन्न नाम गरेको बजारमा आउने, आज आउने भोलि हराउने चिज लङ्गटम हुँदैनन् र क्वालिटीयुक्त हुन्छन् भन्नेमा पनि विश्वस्त हुन सकिँदैन । कतिले रिजेक्सन क्वालिटीलाई पनि रिमेन्टेन गरेर ल्याएका हुन्छन् । ती सामान हेर्दा उस्तै पनि लाग्छ । तर बजारमा क्वालिटी र टिकाउको हिसाबमा राम्रो हुँदैन । यही ग्राहकलाई कन्फुयुजिङ्ग छ, हेर्दा उस्तै देखिन्छ, कुन राम्रो हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ । ब्रान्डमा काम गर्ने हामीले इनकम होइन फ्युचर हेर्छौं, क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्दैनौं । कमसल सामान बजारमा जान दिँदैनौं ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, वास्तविक कुराको शेयरिङ्ग नै बजारमा पुर्याउन गाह्रो छ । लेयर्स धेरै छ बजारमा । फलानोको प्रोडक्ट रिकोमेन्डेड गर्दा मैले के पाउँछु ? भन्ने किसिमको धारणा वास्तवमा हाम्रो समाजमा देखिएको छ । एटा व्यक्तिले घर बनाउँछ, घर बनाउने व्यक्तिसँग लेयर्सहरु हुन्छ, इन्जिनियर, ठेकेदार हुन्छ, प्लम्बर, सिकर्मी आदि । यी सबैको भ्वाइसमा राम्रो भए मात्र घर बनाउनेले ए राम्रो हो भन्छ । यसमा ठूलो कमिसनको जालो रहेछ । ग्राहकसम्म वास्तविक सही कुरा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसकारण आवश्यक प्रोडक्टको बारेमा कसैको कुरा सुन्नु भन्दा पनि स्वयं आफैंले पनि एकपटक बुझ्न जरुरी हुन्छ । जसले कमिसन धेरै दिन्छ, उसको सामान राम्रो छ भन्ने चलन छ, यसलाई हटाउन जरुरी छ । एउटा ब्रान्डिङ्ग कन्सेप्टम जाँदा क्वालिटी र प्राइसमा एक्युरेसी आएपछि विस्तारै ग्राहकहरुले बुझ्दै जानुहुन्छ ।
सिल्क प्लास्टर पहलिोपटक नेपाली बजारमा भित्र्याउन पनि सफल हुनुभएको छ, यसका विशेषता केके छन् ?
सिल्क प्लास्टर नेपालमा हामीले तीन वर्षअघि युरोपबाट भित्र्याएका हौं । हेर्दाखेरी वाल पेपरजस्तो भएर यसलाई लिक्विड वाल पेपर पनि भनिन्छ । बजारमा वालपेपर र रंगको विकल्पमा यो ग्राहकहरुले बढी रुचाउनुभएको छ । सामान्य कलरहरुभन्दा केही महँगो, तर यसका धेरै फाइदाहरु छन् । यो वालमा IMM को थिकनेसमा रहने, वाललाई टच गर्दा वालमा चिसो-तातो हुन रोक्ने, लुक्स राम्रो देखिने, नेचुरल (केमिकलरहित), एक पटक युज गरेपछि १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने यसका मुख्य विशेषता हुन् ।
यो ग्रीन (नेचुरल) प्रोडक्ट हो, कुनै किसिमको केमिकल प्रयोग भएको हुँदैन । भित्तामा लगाउन एकदमै सजिलो छ । विभिन्न किसिमको सिमेन्टेड वालमा, सिलिङ्गमा, पिल्लरमा, सिसामा, काठमा, प्लाइउडमा एक कोड प्राइमर लगाएर सिधै लगाउन सकिन्छ । केही हदसम्म साउन्ड प्रुफ र इकोलाई नियन्त्रण गर्छ । तापक्रम नियन्त्रण गर्ने, आगोले झट्ट नसमाउने यसका विशेषता हुन् । हामीले भित्तामा प्रयाेग गरेको कलरलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन तर यो सिल्क प्लास्टरलाई एक ठाउँमा प्रयोग भइसकेको कलरलाई निकालेर पुनः अर्को ठाउँमा अन्त लैजान सकिन्छ ।
आर्ट फिल्डमा लाग्नुभएका आर्टस्टिकहरुले यसबाट सजिलै वालमा आर्टहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ । यो कटन फेबरिकबाट बनेको हुँदा वाललाई लुगा लगाइदिएजस्तै हाे, जुन १० वर्ष सजिलै प्रयोगमा आउँछ । यसको प्रयोग गर्ने ग्राहकहरु एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
बाँधेर खैरेको हत्या : दुवै पक्षविरुद्ध अनुसन्धान हुने, माइतीघरमा प्रदर्शन
सागरको ‘संघर्ष’ : युवालाई प्रेरित गर्ने यस्तो छ भिडियो
गोलभेंडाको जुस पिउँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
2021-06-06 2021-06-06 Postmandu
पोखराको लेकसाइडमा पनि खुल्यो किंग्स लाउञ्ज, यस्ता छन् विशेषता
घरमै यसरी बनाउनुहोस् स्वादिलो लस्सी
सन्देश घिमिरे प्रकाश अधिकारी रोशन भुजेल